Ngomnotho wayo wanamuhla futhi oqinile, iJalimane ingelinye lamazwe eliwumthombo wethemba kuzakhamizi eziningi. Singasho ukuthi yizwe elikhangayo kakhulu emfundweni yolimi ngamathuba emfundo esezingeni eliphakeme eliwanikeza abafundi.
Lapho umhlaba jikelele waseJalimane ukhulunywa ngabantu ababalelwa ezigidini eziyi-100, iTurkey, futhi nangabafundi ezweni lethu ngenxa yobudlelwano obuhle eGermany ars lulimi oluvame ukukhethwa. Sithanda ukunikeza ulwazi ngeMfundo Yezilimi eJalimane, njengoba sicabanga ukuthi kuzoba wusizo kubafundi abafuna ukuthola imfundo yaseJalimane eJalimane endlunkulu yabo.
Inikezwa Kanjani Imfundo Yezilimi EJalimane?
Singasho ukuthi lesi sinqumo esenziwe abafundi abathanda iJalimane ngemfundo yolimi lwesiJalimane silungile impela. IJalimane inikeza amathuba amaningi abafundi ngokwezemfundo, futhi ngamazinga ahlukene emfundo nezinhlelo zemfundo ephakeme, inika abafundi ithuba lokuphothula nge-diploma eyamukelwa ezweni lethu nasemhlabeni jikelele.
Amadolobha ancanyelwa yilabo abafuna ukufunda ulimi eJalimane yiMunich, iDuesseldorf, iFrankfurt neBerlin. Izifundo ezifundiswa ezikoleni zezilimi eJalimane zinezifundo okungenani ezingama-20. Ngokuvamile, i-visa yabavakashi yanele kulabo abafuna ukuvakashela izwe ngokuqeqeshwa okuthatha cishe izinyanga ezintathu. Kodwa-ke, kulabo abazoba nesikhathi eside semfundo, kungakuhle kakhulu ukuthola i-visa yabafundi. Singasho ukuthi izinhlelo ezikhethwa kakhulu zemfundo yolimi eJalimane yiJalimane ejwayelekile, ibhizinisi laseJalimane, ukulungiselela ukuhlolwa kweTesDaf isiJalimane, isiJalimane esinamandla.
Yiziphi Izinzuzo Zokuthola Imfundo Yezilimi eJalimane?
Njengoba ulimi olukhulunywa kakhulu eYurophu lungesiJalimane, abafundi bazoba nenzuzo enkulu maqondana nomsebenzi esikhathini esizayo.
IJalimane yizwe elinomnotho yize linamathuba amaningi maqondana nemfundo.
Iqiniso lokuthi ukuqeqeshwa okunikezwa eJalimane kunikezwa ngokuxhaswa nguhulumeni kukhuphule izinga lemfundo kakhulu.
ITurkey nayo isondele kakhulu endaweni enenzuzo ngokuya eJalimane.
Kunezindlela eziningi lapho abafundi bangahlala khona ngokwesabelomali sabo.
# Inikezwa Kanjani Imfundo Yezilimi EJalimane?
# Yiziphi Izinzuzo Zokuthola Imfundo Yezilimi eJalimane?
Imininingwane ngezifundo zolimi lobuciko eJalimane
Imibhalo Iyadingeka kuVisa Yokuhlanganiswa Komndeni waseJalimane